China Flat Type Connector (SL) fekitori nevatengesi | Chigong
AID Flat Type Connector (SL) yakagadzirirwa uye kugadzirirwa DIN 22258-1 & MT / T99-1997 & PN-G-46705 mitemo nemataurirwo, aine chiwanikwa chihombe simbi yekusangana izere michina zvivakwa.
Iyo Flat Type Connector (SL) inoshandiswa kubatanidza DIN 22252 denderedzwa yekubatanidza ngetani munzvimbo dzakamira uye dzakatwasuka uye mamwe maketani mukuendesa / kusimudzira kunyorera.
denderedzwa simbi yekubatanidza cheni machuma, denderedzwa chinongedzo chekuchera cheni macomputer, DIN 22252 mugodhi cheni, DIN 22258-1 flat type connectors, mugodhi wekutakura cheni, ndege bar cheni system
Gungano reFlat Type Connector (SL) rinoratidzwa pamusoro apa mifananidzo.
Mufananidzo 1: Flat Type Connector (SL)
Tafura 1: Flat Type Connector (SL) zviyero & zvemagetsi zvivakwa
simba rinoshanda riri 70% yeMBF.
simba rekuyedza riri 85% yeMBF.
Pashure: G-209 Screw Pin Anchor Shackle
Zvadaro: Flat Type Chinongedzo (SP)